Toamasina: any am-ponja ry Rasihanaka sy namany | NewsMada
Toamasina: any am-ponja ry Rasihanaka sy namany
Par Taratra sur 07/09/2018
Tratran’ny polisy ihany ry Rasihanaka sy ny namany, mpanao fanafihana mitam-piadiana sy halatra moto izay tena mampalaza ireto jiolahy telo lahy ireto, amin’ny faritry Mangarivotra, Ambolomadinika, Mangarano ary manodidina ny trano fandihizana any Ankirihiry bazary may, any Toamasina avokoa. Ny faran’ny herinandro teo no tra-tehaky ny polisin’ny UIR izay eo ambany helatry ny polisy “centrale” ireto jiolahy ireto. Niainga avy tamina fahitana moto
halatra no nahatrarana azy telo lahy ireo, ka i Rasihanaka, I Gabin ary Ralava. Tamin’ny alalan’ny renim-piananakaviana iray norobain-dry zalahy moto sy nambanana basy mba hahazoana ilay moto no anton’ny fahatrarana azy telo lahy. “Efa novana loko ny moto fa mbola fantatr’ ilay renim-piananakavina tompony ihany raha sendra hitany nandalo ary niantso polisy izy no niezaka nanara-dia ilay moto iray, ka taorian’izay no nahafahana
nisambotra ireto jiolahy telo lahy ireto”, hoy ny komisera, Razafindahy Manitra Fleurys. Nohamafisin’ ity farany fa miara-miasa amin’ny mpandoko moto ireo jiolahy. Natolotra ny fampanoavana izy ireo ka naiditra vonjimaika am-ponja avokoa.